Mat puzzle izingane: ukuthuthukiswa ngokusebenzisa play
A ithoyizi kuhle ingane akufanele kuphela abanalo, kodwa futhi ukuthuthukisa. Kuyinto lo mgomo ufinyelelwe Abadali imikhiqizo efana ukhaphethi puzzle izingane. Lesi sipho isiqiniseko ukujabulisa kunoma iyiphi ingane, ngoba yenziwa elinama elithambile, ezahlukene imidwebo elikhanyayo ezimibalabala. Yini ezinye izidingo kumele athobele ithoyizi ezifana?
UMats, puzzle izingane: izinhlobo kanye nezici
Okokuqala-ke Kuyaphawuleka ukuthi le mikhiqizo zenziwa ngezinto imvelo ukuthi zithambile futhi kulula kuphela. Isakhiwo ukungena nakwamanye amazwe ivumela impahla ukukhombisa esiyingqayizivele ezishisayo ukwahlukanisa namanzi repellency, ngakho ingasetshenziswa kokubili ekhaya futhi emgwaqeni. Mat puzzle izingane - lokhu kuyinto ithoyizi esiyingqayizivele ezokwenza fundisa ingane yakho ngomusa. Siyabonga kuye, ungakwazi ukufunda ukufunda, ukubala, ukuhlukanisa phakathi zeJiyomethri futhi izibalo. Ngaphezu kwalokho, lokhu ithoyizi is wokuxhumanisa bezibona kwendawo, eba inkulumo, ukunakwa ukucabanga okunengqondo.
Soft mat puzzle izingane uhlukile futhi ezihlukahlukene. Kuthinta ezingaba ixhumeke olulodwa umdlalo isikhala puzzle eziningana. Ngakho, kungashiwo uhlinzeke ingane zone lonke elithambile, lapho kuzoba mnandi futhi ephephile ukuchitha isikhathi. Ngokuvamile, ingxube enjalo yakhiwa izingcezu kahle esikhulu, okuyinto ngisho ezintathu nonyaka owodwa ubudala kalula ukuxhuma. Gcina lezi puzzle iphakheji nge uziphu, uthwele kubo akuyona kuphela lula, kodwa futhi elula.
Mat puzzle izingane kaningi ukhonza njengelungu phansi esehlanganise e izinkulisa, isikhungo ahlukahlukene asathuthuka, igumbi umdlalo bese amahholo ezemidlalo. Akunakwenzeka yini ukuhlola yokufunda kwakhe nomphumela, njengoba ngesisekelo isithombe, ungakha yonke indaba yomdlalo, ikakhulukazi uma indlu kukhona izibalo elincane labantu noma imishini. Namuhla ungakwazi ukuthenga ingxube elithambile, oluveza idolobha, i-zoo, ipulazi ekhaya noma izilwane zasehlathini. Ngayinye yalezi izithombe kungaba indlela enhle kakhulu ekucebiseni ulwazi ingane.
Mat puzzle izingane - kuba inhlanganisela izimfanelo eziningana ezinhle: ukuphepha ukulimala lokuvikela, ukwahlukanisa kanye ukungabikho iphunga, kalula inhlangano kanye ukumelana izinto zokususa amabala. Futhi namhlanje, kukhona inguqulo ewusizo kwalo mkhiqizo njengenhlangano pad wamathambo nge massage umphumela. Njengomthetho, lezi puzzle Kunconywa ukusebenzisa izingane yanoma yimuphi qembu lobudala, abanezinkinga ngezinyawo zabo. Unyawo massage kunomphumela omuhle isimo umzimba iyonke.
Ingabe ufuna diversify yokuzilibazisa wengane yakho futhi simfundise ithoyizi ezokwenza imisebenzi kanye nekuceceshwa? Phawula puzzle ezithambile phansi. Imibala egqamile, lula, futhi kalula inhlangano, storylines ezithakazelisayo - konke okungase kuthathe isikhathi eside ukuba ingane yakho ngesikhathi wena benza imisebenzi yasekhaya. Futhi khumbula, ithoyizi ezinhle kufanele kube nemnandi, izinga okusezingeni ukuqeqeshwa cross-exhumene, kodwa futhi ewusizo, okungukuthi nje kuphela egqamile. Okuwukuphela kwendlela ukukhulisa izingane ngokuvumelanayo athuthukile.
Stroller Winter: Ukukhethwa sokunquma
ONgcwele Assumption Monastery (Krasnoyarsk), ikheli, isithombe nomlando
Isifundo semibhalo: "Ku-Volga", i-Nekrasov. Ukuhlaziywa kwenkondlo
Dream Ukuhunyushwa: yini uyaphupha uphawu?
Lycheva Ekaterina Aleksandrovna: izithombe kanye biography
Umuthi 'Tsefekon' (amakhandlela izingane): Imiyalelo
Indlela ukufaka umdlalo kwithebhulethi - amathiphu ambalwa alula
I-Hyundai Solaris 2014: ukubuyekezwa. I-Hyundai Solaris 2014: izincazelo
Indlela ukukhetha amatshe esifanele usuku lokuzalwa kanye nezinye nemingcele ezibalulekile? Nama mascots ezinkingeni 100